I-china oluzenzekelayo i-Ultrasonic Tube Filler kunye ne-Sealer HX-009 mveliso kunye nabathengisi | Umatshini weHX
Ukunikezwa Amandla I-AC220V / 110V
Ukuzalisa Uluhlu A: 6-60ml B: 10-120ml
IC: 25-250ml D: 50-500ml
(unokukhetha ngokusekwe kubungakanani bomthengi)
Ukuzalisa Ukuchaneka ± 1%
Umthamo 20-28pcs / min
Ukutywina iDia. I-13-50mm (yenziwe ngokwezifiso)
Ukuphakama kweThubhu 50-200mm
Uxinzelelo lomoya 0.6-0.8Mpa
Ukusetyenziswa komoya 0.38m3/ imiz
Ubukhulu I-L1630 * W1300 * H1580
* Umatshini unokugqiba ngokuzenzekelayo ukondla ityhubhu, uphawu lokubhalisa oluchonga, ukugcwalisa, ukutywina ngekhowudi, ukuphela kokucheba, ityhubhu ngaphandle kokondla, ngokuzenzekelayo, gcina iindleko zabasebenzi kunye neendleko eziphantsi zemveliso.
* Yamkela itywina ye-ultrasonic yokutywina, akukho mfuneko yokufudumeza ixesha, ukuzinza okuzinzileyo kunye nokucoceka okucocekileyo, akukho kugqwetha kunye nenqanaba lokulahla eliphantsi elingaphantsi kwe-1%.
* I-R & D ezimeleyo yedijithali yokulandela umkhondo yedijithali ngokuzenzekelayo, akukho sidingo sokwenza uhlengahlengiso ngesandla, kunye nomsebenzi wembuyekezo yamandla ombane, ukunqanda ukuncitshiswa kwamandla emva kokusebenzisa ixesha elide. Ngaba ngokukhululekileyo uhlengahlengise amandla ngokusekwe kwityhubhu yezinto kunye nobukhulu, uzinzile kunye nobuncinci bezinga lesiphoso, wandise ixesha lobomi kunebhokisi yombane eqhelekileyo.
* I-PLC ngenkqubo yolawulo lokuchukumisa isikrini kunye nenkqubo yealam, inokujonga ngokuthe ngqo ulwazi lwe-alamu kwiscreen sokuchukumisa, inokufumana ingxaki kwaye isombulule kwangoko.
* Umatshini uxhotyiswe ngesixhobo sokukhusela ukhuseleko kunye nokukhuselwa okugqithisileyo.
* Inkqubo yesalathiso seCam inokubeka ngokuchanekileyo kwizikhululo ezilishumi zokusebenza.
* Yenziwe nge-304 Yentsimbi engenasici, i-asidi kunye nokumelana nealkali, ukumelana nokubola.
* Akukho tyhubhu, akukho kuzaliswa, akukho tyhubhu, akukho msebenzi wokutywina, ukunciphisa izinto zetyhubhu, umatshini kunye nelahleko yokubumba.
* Ukwamkela umlomo wokugcwalisa u-Anti-dripping.
Isetyenziswa ngokubanzi kukutya, amayeza, izinto zokuthambisa, imichiza kunye nezinye iiplastiki, i-PE, ialuminiyam elaminethiweyo ityhubhu yokugcwalisa nokutywina.
1. Impompo yokugcwalisa ngokuzenzekelayo
2. Ibhanti yebhatyi ephindwe kabini ngokufudumeza kunye nomsebenzi ovuselelayo
3. 316L Stainless iindawo contact
4.Ukuvuthelwa komoya ngemilomo eyi-viscous ephezulu kunye nezinto ezinamathelayo
5.Ucango lokhuseleko nge-alamu kunye nomsebenzi wokumisa
Egqithileyo Ukuzalisa ityhubhu kabini kunye nokutywina umatshini HX-009S
Oluzenzekelayo Tube lokugcwalisa Sealer
IPlastiki yePlastiki yokuGcwalisa kunye nokuTywina
Isihluzi seTyhubhu kunye nokuTywina